Siddeed qof oo lagu dilay weerar Yemen - BBC Somali - Warar
Siddeed qof oo lagu dilay weerar Yemen
Markii u dambaysay ee la cusboonaysiiyay: 20 Janaayo, 2013, 13:44 GMT 16:44 SGA
Ciidanka Yemen ayaa dagaal kula jira maleeshiyo islaamiyiin oo xiriir la leh Alqacida.
Wararka ka imaanaya Yemen ayaa sheegaya in weerar diyaaradaha Maraykanka ee aan qofna wadin ay ku qaadeen Yemen inay dileen siddeed qof.
Gantaalo laga soo riday diyaarada ayaa ku dhacay laba baabuur gobolka Marib ee bartamaha Yemen.
Mid ka mid ah dadka dhintay, ayaa lagu sheegay inuu yahay hogaamiyaha maleeshiyada Alqacida Imaaciil Bin Jamil. Tan iyo bishii hore Maraykanka ayaa kordhiayay weerarka cirka ee diyaarada aan qofna wadin ee ay ku qaadayaan Yemen halkaas oo Alqacida ay ka dhigatay saldhig.
Argagixiso In ka badan 70 qof oo ku dhintay Nigeria
14 Abriil 2014
Kabtanka doontii K. Kuuriya oo la xirayo
18 Abriil 2014
Aljeriya: Butufliqa oo markale ladoortay
Dahabshiil iyo Barclays oo heshiiyay